Ebumnuche 7 ịzụta Samsung Galaxy S7 | Akụkọ akụrụngwa
7 ihe mere ịzụta Samsung Galaxy S7
Taa, e rerela nke ọhụrụ na Spain na ụwa niile. Samsung Galaxy S7. Ọ bụ eziokwu na ụbọchị ole na ole enwere ike idobe ya, mana rue taa esiteghị na ya zigara ndị niile zụtara ya n'echeghị ya. N'oge ahụ ọ dị ka ọtụtụ ndị ọrụ anwaala ịzụta flagship Samsung ọhụrụ, mana taa anyị ga-egosi gị ihe kpatara 7, nke ọ bụla kwenyesiri ike, ihe kpatara ị ga-eji zụta ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ a n'aka ụlọ ọrụ South Korea.
Dị ka ọ na-eme mgbe nile n'ụdị isiokwu a, echi anyị ga-ebipụta ọzọ nke aha isiokwu a dịgasị obere ma bụrụ ihe kpatara 7 ka ị ghara ịzụta Samsung Galaxy S7, mana taa anyị ga-elekwasị anya n'inye gị 7 ihe mere ị ga-eji zụta Galaxy S7.
1 Gaghị ahụ otu imewe
2 Batrị ahụ abụghịzi nsogbu
3 Nloghachi nke microSD iji kwụsị nsogbu nchekwa
4 Já na karịsịa mmiri agaghị abụ nchegbu
5 Ihe ohuru nke mmiri mmiri
6 Igwefoto, ihe na-ekpebi ihe
7 Ọnụahịa abụghị nsogbu
Gaghị ahụ otu imewe
Ogologo oge Samsung na-agbanwe agbanwe nke ngwaọrụ dị iche iche ọ malitere na ahịa, na-achọ imewe nke ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ maka njedebe dị elu. Na Galaxy S6 Samsung eruola izu okè, mana ya na tweaks nke ndị South Korea mere a Galaxy S7 anyị nwere ike ikwu na ha ruru izu okè.
Enweghị ihe ize ndụ nke ịbụ onye na-ezighi ezi, echere m na a ga-ekwudị na anyị na-eche ihu smartphone nwere atụmatụ kachasị mma na ahịa, na-eti ndị ọzọ dị arọ dị ka iPhone 6S, ndị otu ezinụlọ Nexus ma ọ bụ Huawei P8.
Batrị ahụ abụghịzi nsogbu
Ndị na-emepụta nke ngwaọrụ mkpanaka na-arịwanye elu na-enye anyị ikike ka ukwuu nke batrị, na-abawanye ntakịrị ọkpụrụkpụ nke ọnụ ndị ọrụ ahụ dị njikere ịkwado n'ọtụtụ ọnọdụ na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Galaxy S7 a nwere 450 mAh karịa batrị karịa Galaxy S6 na usoro nke ọkpụrụkpụ ọ mụbara naanị 1,1 millimeters. Batrị ahụ na-agbago ruo 3.000 mAh nke bụ ọnụ ọgụgụ nke priori dị ka ihe ga-ezuru iji nwee ike ịpịpụta ngwaọrụ mkpanaka a. Na enweghị ike ịnwale ya, ọ ga-esiri S7 a ike ka ọ ghara ikwe ka anyị nwekwuo onwe anyị karịa otu ụbọchị.
Ọzọkwa nke Marshmallow's Doze ọnọdụ Ọ bụ ihe ga-emesi anyị obi ike na nchekwa zuru oke iji batrị ka mma na nke a na-enye anyị ohere nnwere onwe ka ukwuu.
Nloghachi nke microSD iji kwụsị nsogbu nchekwa
Na Galaxy S6 Samsung kpebiri iwepụ ohere nke ịgbasa nchekwa dị n'ime site na iji kaadi microSD, ihe dị oke egwu. Site na mmejọ ị na-amụ mgbe niile, ihe na Galaxy S7 enweela nloghachi nke oghere iji nwee ike fanye kaadi microSD iji chefuo nsogbu nchekwa.
Site na nke a, anyị nwere ike ịzụta Galaxy S7 na obere nchekwa, zụta kaadi microSD, nha anyị chọrọ, ma chekwaa euro ole na ole, ma karịa ihe niile echefuru banyere nsogbu na nchekwa nke ọtụtụ ndị ọrụ nwere Galaxy S6.
Já na karịsịa mmiri agaghị abụ nchegbu
Olee otú ọ ga-abụ na uzọ ọzọ a Samsung Galaxy S7 nwere IP 68 asambodo nke na-eme uzuzu ma obu mmiri abughi nsogbu nye ya. Imirikiti ndị ọrụ anaghị etinye ama anyị na mmiri, mana ọ nweghị onye ọ bụla nwere nchekwa pụọ ​​na idobe otu iko mmiri na ngwaọrụ anyị, dịka ọmụmaatụ. N'ihi asambodo a, ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nsogbu agaghị enwe nsogbu maka ọdụ a.
Ọ bụ ezie na Samsung kwadoro na oke na Galaxy na-eguzogide mmiri na uzuzu Nkwado anyị bụ ka ị ghara ịbanye na Samsung smartphone ọhụrụ a na mmiri ma ọ bụ jiri ya mee ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị ga-egwu ya n'ụzọ dị egwu, echefula na ọ ga-efu gị karịa euro 700.
Ihe ohuru nke mmiri mmiri
Microsoft webatara mmiri mmiri friji na Lumia 950 na Samsung kpebiri isonye a ụgbọ ala ka ọ ghara inwe nsogbu ọ bụla na processor, nke na-esiwanye ike, na nke n'ezie nwere ike na-ekpo ọkụ karịa ka ọ dị mkpa.
Ekele maka nhọrọ a anyị nwere ike ichefu banyere nsogbu na processor, nke nwere ike imetụta arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ. Mgbe anyị na-ekwu maka ekwentị dị elu, ọ dị mma mgbe niile na onye nrụpụta ahụ na-agba mbọ ịnye atụmatụ ndị na-enye anyị ohere ibi nwayọ ma ghara ịtụ egwu oge ọ bụla na Galaxy S7 ọhụrụ anyị n'okwu a ga-apụ n'ọkụ.
Igwefoto, ihe na-ekpebi ihe
Igwefoto bụ otu n'ime ike nke onye ọhụrụ a nke ezinụlọ Galaxy na bụ na Samsung maara na ọtụtụ ndị ọrụ a ama doo ha mbụ niile site na ike nke igwefoto.
N'oge a ụlọ ọrụ South Korea chọrọ ịhapụ agha megapixel iji lekwasị anya na imeziwanye n'ụzọ ọzọ. Igwefoto ihe mmetụta nke a Galaxy S7 nwere "naanị" 12 megapixels, ọ bụ ezie na ibu na nke ahụ na-enye anyị ohere ka nweta ogo onyonyo ka mma karịa nke anyị nwetara na Galaxy S6.
Oghere ahụ etoola f / 1.7 na-enye anyị ohere ọhụrụ. Ikwesiri iburu n'uche ntinye nke teknụzụ Dual Pixel. N'oge ahụ ihe osise ndị mbụ anyị hụworo bụ ndị pụtara ìhè, n'agbanyeghị ma ọnọdụ ahụ pere mpe ma ọ bụ nnukwu ọkụ.
Ọnụahịa abụghị nsogbu
Ikekwe ọ dịghị onye na-eche otu ihe ahụ, mana Taa ọnụahịa dị elu nke Samsung Galaxy S7 abụghị nsogbu Ma ọ bụ na onye ọ bụla nwere ike inweta ekwentị ọhụrụ a site na onye ọrụ ekwentị ọ bụla na ọnụahịa dị ọnụ ala ma nwee ike ịkwụ ụgwọ ya na obere ntụsara ahụ.
Ọ bụrụ na ị kwenyeghi na ịnwebanye aka na ụlọ ọrụ ekwentị, nke na-abụkarị ọnọdụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ na-etinye iji nye onye ọrụ ya njedebe, ịnwere ike ịzụta ya mgbe niile na nnukwu ebe ọ bụ karịa nkịtị nke na-enye anyị ohere ịkwụ ụgwọ nzụta na obere ntụsara ahụ na-enweghị mmasị.
Have nwere ihe ọ bụla mere na-enye ndị niile na-enwe obi abụọ ma ịzụta otu nke ọhụrụ Samsung Galaxy S7?Gwa anyị gbasara ya na oghere edere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ ọ bụla anyị nọ na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » 7 ihe mere ịzụta Samsung Galaxy S7
Etu esi eji ma nwee mmasị na MSQRD, ngwa ejiji